Nhau - Maitiro ekugadzirisa CNC indasitiri yekugadzirisa mushe
CNC yekugadzirisa indasitiri mushure megore ra2019, mabhizinesi mazhinji uye mazhinji anonzwa kudzikira kwemirairo yemusika. Maitiro ekugadzirisa iyo CNC yekugadzirisa indasitiri rave musoro wekushushikana kune vakawanda vezvemabhizimusi. Wally michina tekinoroji yanga ichishanda muCNC yekugadzirisa indasitiri kwemakore mazhinji, uye zvakare yakatarisana nedambudziko rakadai. Chii chatichaita?
Kazhinji kutaura, CNC yekugadzirisa indasitiri ndeyakakosha indasitiri yekugadzira. Mukuona kwevanhu vasina kunaka, inogona kunge iri indasitiri yekugadzira yakaderera. Mukuona kwevanotarisira, iyo yakanaka kwazvo indasitiri yekugadzira. Iko hakuna musika hupenyu muganho wezvigadzirwa, uye hapana mutsauko pakati peiyo-mwaka nemwaka wepamusoro.
Kuti urarame zvirinani muCCC yekugadzirisa indasitiri, chakanyanya kukosha mhando. Hunhu hunofanirwa kuve hwetsvimbo yekusimudzira bhizinesi. Mazhinji emidziyo indasitiri vatengi akaoma kukudziridza mhando yepamusoro CNC yekugadzirisa vatengesi Chikonzero chakakosha ndechekuti mhando yezvigadzirwa haina kusvika padanho, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kuunganidzwa nekutumirwa kwevatengi. Kune rimwe divi, iri kuita CNC kugadzirisa Kune rimwe divi, ndivo vatengi vasingakwanise kuwana yepamusoro-soro CNC processors.
Maitiro ekuita basa rakanaka muhunhu hwechigadzirwa, kutanga kwezvose, isu tinofanirwa kuterera kune zviyero, uye nekushandisa zvakatemwa zviyero zvakanaka. Munguva yekumisikidza maitiro, hapafanire kunge paine chinodzikiswa, senge kudhirowa zviyero, mashandiro, zviyero zvekutarisa, nezvimwe zvese zvinongedzo zvechigadzirwa kubva pane zvakasvibirira kusvika pakutumirwa zvinodzorwa zvakanyanya uye zvinoitwa zvinoenderana nematanho, kuti vagadzire yakanaka yemubatanidzwa tsika yemhepo, mhando ichave iri nani uye zvirinani Panofanirwa kuve nemusika.
Mubhizinesi rezvebhizimusi ra2019, volley michina tekinoroji inoronga kuunza yakakwira-magumo eJapan kutendeuka yekugaya michina yekugadzirisa zvakare, ichiwedzera zvakanyanya kugona kwekugadzira uye zvirinani kushandira vatengi vekare uye vekare.